‘भलिबल भाले र खसी बाजीको खेल मात्रै होइन’ - संवाद - नेपाल
‘भलिबल भाले र खसी बाजीको खेल मात्रै होइन’
गत ८ जेठमा सरकारले भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्‍यो । यसअघि डन्डीबियोलाई राष्ट्रिय खेल मानिएको थियो । राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाएकाले अब यस खेलले राज्यबाट महफ्व पाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा संघका अध्यक्ष मनोरञ्जनरमण शर्मासँगको संवाद :
भलिबललाई नै किन राष्ट्रिय खेल बनाउनु परेको हो ?
यो खेल हिमाल, पहाड र तराई जुनसुकै भूगोलमा सहजताका साथ खेल्न सकिन्छ । यसले सबै नेपालीलाई जोड्ने काम गर्छ । यही कुरा हामीले सरकारलाई बुझाएपछि यसले राष्ट्रिय खेलकुदको मान्यता पाएको हो ।
राष्ट्रिय खेल बनेपछि भलिबलको विकासमा के फरक पार्छ ?
ठूलो फरक पर्छ । यसअघि भलिबल राज्यको प्राथमिकतामा परेको थिएन । अब राष्ट्रिय खेल बनेपछि त स्वत: राज्यले यस खेलको प्रवद्र्धन गर्छ । अब भलिबलले गुणात्मक फड्को मार्ने आशा गरेका छौँ । सबैभन्दा ठूलो कुरा, खेलाडीमा उत्साह थप्छ यसले । अब यो खेल गाउँमा भाले र खसी बाजी राखेर खेलिने खेलमा मात्रै सीमित हुने छैन ।
राष्ट्रिय खेल बनेपछि संघको कस्तो योजना छ ?
गाउँ स्तरमै भलिबल प्रतियोगिताबाट राम्रा खेलाडी छान्ने योजना बनाएका छौँ । स्कुल, कलेजहरूमा समिति बनाएर प्रतियोगिता गर्ने र राम्रा खेलाडीलाई केन्द्रमा तानेर तालिम दिने छौँ । केही समयअघि नेदरल्यान्डबाट पाँचौँ तहको प्रशिक्षक ल्याएर तालिमसमेत दिएका थियौँ ।
नेदरल्यान्डबाट आएका प्रशिक्षकबाट हामीले के सिक्यौँ ?
खेलाडी र प्रशिक्षक दुवैले प्राविधिक कुराहरू सिके । विश्वको भलिबलमा हाम्रो हैसियत के रहेछ भन्ने मापन गर्ने अवसर पनि पाइयो । हामी निकै तल रहेछौँ ।
हामीमा कमजोरीचाहिँ के रहेछन् ?
धेरै छन् । पहिलो कुरा त शारीरिक तन्दुरुस्ती रहेनछ, हामीमा । त्यसपछि अनुशासन, आत्मविश्वास रहेनछ । हामीकहाँ दक्ष गुरुको पनि अभाव रहेछ । गुरुले बाहिर तालिम लिने अवसर नपाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्डलाई पछ्याउन सकेका रहेनछौँ । जर्सी, जुत्ताजस्ता आधारभूत कुराको कमीले हामीमा उत्साह मारेको रहेछ ।
आधारभूत कुराहरूकै अभाव रहेछ होइन ?
हो । अब भने त्यस्तो अवस्था नरहला । राष्ट्रिय खेल घोषणा हुनुअघि नै सरकारले बजेट ल्याएकाले यसपालिको बजेटमा भलिबलले प्राथमिकता पाएन । तर, आगामी वर्षदेखि राम्रै बजेट पाउने आश्वासन पाएका छौँ ।
सामान्यत: अन्य खेलमा महिलाभन्दा पुरुषको बढी चर्चा हुन्छ । तर,
भलिबलमा पुरुषभन्दा महिला भलिबलको ग्ल्यामरस छ । किन होला ?
महिलाहरूले साँच्चै स्तरीय खेलेर हो । श्रीलंकामा नेपाली भलिबल खेलाडीलाई डलर तिरेर खेल्न बोलाइन्छ । महिलाहरूको खेल साँच्चै राम्रो छ । पुरुषको पनि खेल कौशल विकास हुँदैछ ।
फुटबल, क्रिकेटको तुलनामा भलिबलको क्रेज किन कम भएको हो ?
फुटबल, क्रिकेटको दाँजोमा भलिबललाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेकाले यस्तो भएको हो । तर, बिस्तारै ‘अपग्रेड’ हुँदै जान्छ ।
दक्षिण एसियाली तहमा गोल्ड मेडल जित्न अब त सकिएला नि ?
दक्षिण एसियामै जित्न भने लामै समय कुर्नुपर्ला । तर, सपना भने देख्नुपर्छ ।
भलिबलको पूर्वाधारको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?
शून्य छ भने पनि हुन्छ । एउटा कभर्ड हल छैन । काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा भएको कभर्ड हल भुइँचालोले कामै नलाग्ने गरी चर्काएको छ । हामीले अनुरोध गरेर नेपाली सेनाको कभर्ड हल प्रयोग गरिरहेका छौँ ।
‘अनुसन्धान किन असफल भयो, समीक्षाको बेला हो’